Intshayelelo kwiKhosi yokuBona kude-iGeofumadas
Ikhaya/Izifundo ze-AulaGEO/Intshayelelo kwiNkqubo yokuDlala kude
Fumanisa amandla okuziva kude. Amava, yiva, hlalutya kwaye ubone yonke into onokuyenza ngaphandle kokubakho.
I-Remens Sensing (RS) ineseti yeendlela zokuthatha ikude kunye nohlalutyo lolwazi olusivumela ukuba sazi intsimi singabikho. Ubuninzi bedatha yokujonga uMhlaba isivumela ukuba sijongane nemicimbi engxamisekileyo yendalo esingqongileyo, yendawo kunye nendalo.
Abafundi baya kuba nokuqonda okuqinisekileyo kwemigaqo-siseko ebonakalayo ye-Sensing Remensing, kubandakanya ingqiqo yento ene-electromagnetic radiation (EM), kwaye baya kuphanda nzulu ngokunxibelelana nemitha ye-EM kunye nomoya, amanzi, izityalo, izimbiwa kunye nezinye iintlobo. Umhlaba ovela kude Siza kuqwalasela amabakala aliqela apho kunokusetyenziswa uSensing Remoteing, kubandakanya ezolimo, iJiology, ukumbiwa kwemigodi, i-hydrology, amahlathi, indalo kunye nezinye ezininzi.
Le khosi ikukhokelela ekubeni ufunde kwaye uphumeze uhlalutyo lwedatha kwiSensing Remote Sensing kunye nokuphucula izakhono zakho zohlalutyo lobuchwephesha.
Ukuqonda iikhonsepthi esisiseko soSetyenziso oluMamele kude.
Qonda imigaqo esisiseko yentsebenzo yemisebe ye-EM kunye neentlobo ezininzi zokugubungela umhlaba (uhlaza, amanzi, izimbiwa, amatye, njl njl).
Qonda ukuba amacandelo asemoyeni angawuchaphazela njani umqondiso orekhodiweyo ngamaqonga okude ekude kunye nendlela yokuwalungisa.
Ukukhuphela, ukuqhubela phambili, kunye nokulungiswa komfanekiso wesatellite.
Ukusetyenziswa kwesenzeli kude
Imizekelo ebonakalayo yezicelo ezivayo zokude.
Funda ukuziva usemva kunye nesoftware yasimahla
Ulwazi olusisiseko lweeNkqubo zeeNkcukacha zeJografi.
Nawuphi na umntu onomdla kwi-Remote Sensing okanye ukusetyenziswa kwedatha yendawo.
I-QGIS 3 ifakiwe
Abafundi, abaphandi, ootishala, kunye nabathandi behlabathi be-GIS kunye neL Remote Sensing world.
Nabani na onqwenela ukusebenzisa idatha yendawo ukusombulula imiba yendalo kunye nokusingqongileyo.
Iikhosi-LandWorks Izifundo zeKhosi
Ikhosi ye-ETABS yobuNjineli boLwakhiwo-iNqanaba loku-2